जमिन टेक्नै नहुने हो राष्ट्रपतिज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यू? - JagaranPost
Home/प्रदेश २/जमिन टेक्नै नहुने हो राष्ट्रपतिज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यू?
जमिन टेक्नै नहुने हो राष्ट्रपतिज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यू?
पछिल्लो समय नेपाली सेनाले राष्ट्रपतिका लागि भनेर खरिद गरेको करिब डेढ अर्वको हेलिकप्टर चढेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले झापामा संचालित एक कृषि फर्मको अवलोकन गरेकी थिईन। उनको यस्तो कदमको चर्को आलोचना भएको थियो। कृषिफर्म अवलोकनहेतु झापा गएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले झापाको कृषि परियोजनालाई हेलिकप्टरबाटै हवाई अवलोकन गरेकी थिईन। गौरादह नगरपालिका–५ स्थित महारानीझोडा महिला कृषि सहकारी संस्थामा आबद्ध साना किसानद्वारा प्रवर्तीत एक सय बिघा जमिनमा सञ्चालित नमुना कृषि परियोजना स्थलमा गहुँ, मकै र कोदो खेती लगाइएको छ, सो को निरिक्षण भण्डारीले हेलिकप्टरबाटै गरेकि थिईन।
हिजो साँझ सिराहा, बारा लगायतका पूर्वी जिल्लाहरुमा हुरीबतासले वितण्डा मच्चाऊँदा कम्तिमा ४० जनाको मृत्यु हुन पुगेको छ भने ४०० बढि घाईते भएका छन। कयौं धनमालको क्षति पनि भएको छ। कयौंका घरबास उजाडिएको छ। यस्तोमा जनताद्वारा चुनिएर आएका प्रधानमन्त्रीले समस्याग्रस्त क्षेत्रमा मात्र हवाई अवलोकन गर्नुले राज्य र जनताविचको बढ्दो दुरिलाई संकेत गर्दैन र? यसवारेमा जागरणपोस्ट डट कम ले यौटा संवाद सार्वजनिक गरेको छ,कृपयाँ सहभागी भईदिनुहुन विनम्र अनुरोध पनि छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हावाहुरीबाट प्रभावित क्षेत्रको हेलिकप्टरबाट निरीक्षण गरेका छन्। यनले बाराको अतिप्रभावित पुरैनियामा हेलिकप्टरबाट निरीक्षण गरेका हुन्।
उनी झापाबाट सिमरा र सिमराबाट वीरगञ्ज लागेका छन्। आइतबार बेलुका आएको हावाहुरीमा बारा र पर्सामा गरी २७ जनाको मृत्यु भएको छ। २३ जनाको सनाखत भएको छ।
प्रदेश सरकारमाथी खनिए सिके राऊत, भोजमा ४ करोड उडाऊनेले किन हावाहुरी पिडितलाई सहयोग गर्दैनन?
ह्याप्पी भ्यालेन्टाईन डे !
पप्पुको अर्को बदमासी
प्रदेश २ मा १ र ५ गते सार्वजनिक बिदा